Mifaly amin’ny Teny
Hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravoan’ny foko; Fa nantsoina tamin’ ny anaranao aho, Jehovah, Andriamanitry ny maro ô. Jer.15:16.
Ilaina mandrakariva ny fahari-po,fahatsararn-panahy, fandavan-tena ary fanoloran-­tena eo amin'ny fiainana ny fivavahana araka ny Baiboly. Fa raha lasa fitsipika mafy orina eo amin'ny fiainantsika ny Tenin'Andriamanitra, ny zavatra rehetra izay tsy maintsy ataontsika toy ny teny tsirairay avy, ny fihetsika bitika tsirairay avy dia hanambara fa miantehitra amin'i Jesôsy Kristy isika, ka na ireo eritreritsika aza dia lasa babony avokoa. Rehefa raisin'ny fo ny Tenin'An­driamanitra dia hofoanan' izany ny fiheveran-tena ho manana ny ampy sy mahavita tena. Ho lasa hery ho amin'ny tsara ny fiainantsika, satria hameno, ny saintsika amin'ny zavatry ny lanitra ny Fanahy Masina. Iainantsika ny fivavahan'i Kristy; mifanaraka, tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitra­pontsika.
Ny sasany amin'ireo mihambo ho manana ny fivavahana marina dia mampalahelo fa manao an­tsirambina ilay Tari-dalana nomen'Andriamanitra izay manoro làlana mankany an­-danitra. Mety ho mamaky ny Baiboly izy ireo, saingy mamaky fotsiny ny Tenin'Andriamanitra, tahaka ny famakiana teny nosoratan'ny penin'olombelona,dia manome fahalalana ivelambelany fotsiny ihany. Ny firesahana momba ny fahama­rinana dia tsy hana­masina velively ireo mpihaino. Mety ho mihevitra izy ireo fa miasa ho an'Andria­manitra, kanefa raha teo amin'izy ireo Kristy, dia toy izao no holazainy:"Mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra" - Mat.22:29. Tsy afaka ny hahalala ny hevitry ny fivavahana marina ny olona toy izany.
"Ny teny izay nolazaiko taminareo", hoy Kristy, "dia fanahy sy fiainana" - Jao. 6:63. Nanambara momba ny Tenin’Andriamanitra i Jeremia ka nilaza hoe: "Hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravoan’ny foko"
Misy fanasitranana avy amin’Andriamanitra ny Tenin'Andriamanitra izay tsy azon'ireo milaza ho hendry sy malina handramana kanefa naseho tamin'ireo zaza madinika. "Mahazava ny famoahan’ny hevitry ny teninao, ka manome fahalalana ho an'ny kely saina" –Sal.119:130. Rehefa raketina ao am-po izany Teny izany, dia lasa trano firaketan'ny saina hakantsika ireo zavatra vaovao sy taloha izany. Tsy mahita fahafinaretana intsony amin' fieritreretana zavatry ny tany isika fa hilaza hoe: "Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao" - and. 105. RH,4 May 1897.